Amanyathelo okulandelela iselfowuni- iGeofumadas
Ikhaya/Internet kunye neBlogs/Amanyathelo okulandelela ifowuni
Ukujonga ukubaluleka kweeselfowuni kubomi bethu bemihla ngemihla namhlanje, sihlala sizikhathalela okomntwana, ekuzithengeni izembozo, iglasi enomsindo yokukhuselwa kwesikrini, amakhonkco emqolo wokubamba kunye nabakhuseli amanzi ukuba isixhobo asinamanzi, kodwa akukho nanye kwezi ethintela ukuba kuthi xa sijongile singalahleka okanye silibale kwenye indawo kwaye singaphinde siyifumane, kuba oku kufuneka sazi ukuba singaqhubeka njani ukulandelela izixhobo kwimeko yelishwa kunye indlela yokufumana iselula zenzeke kwaye zenze ngokukhawuleza ukuze zibuyiselwe ngaphambi kokuba ziphule.
Esinye isizathu sokulandelela iselfowuni, kukufuna ukwazi indawo yomntu othize: Umbhangqwana, umntwana okanye umqeshwa othile kwenkampani yakho, ukuqhubeka ukufumana iqela kufuneka lenze oku kulandelayo.
Ukulandelela ifowuni ye-Android kunye ne "Fumana idivaysi yam".
Le nkonzo ye-Android kubasebenzisi beenkqubo zakho zokusebenza isebenza ngale ndlela elandelayo:
Ngenisa Useto lwefowuni - Ukhuseleko kunye nobumfihlo
Kufuneka kufakwe kuwo Fumana idivaysi yam, indawo ye-GPS yefowuni kufuneka isebenze ngenye indlela ayisebenzi
Iqela kufuneka libe nokubonakala kwiGoogle Play.
Oku kuqinisekiswa ngayo Isixhobo se-Google Play - Ukubonakala
Qinisekisa ukuba amanyathelo angaphambili asebenza
Ukulandelela i-iphone ne "Fumana i-iPhone yam"
Ukulandelwa kwezixhobo ze-iOS (i-iPhone, i-iPad, i-MAC okanye i-AirPods) inokwenziwa nge-iCloud okanye isicelo kunye negama elifanayo. Inkqubo iya kwenziwa ngendlela elandelayo:
Fumana Izicwangciso - Cinezela igama lakho - iCloud (Ukuba ne-iOS 10.2 okanye ngaphantsi kuphela kwisinyathelo sokuqala nesithathu
Cinezela Khangela i-iPhone yam kwaye usebenze
Ngena kwi-ID ye-Apple
Xa imeko yeMac inkqubo yile ndlela ilandelayo:
Yiya Imenyu ye-Apple (Uphi i-manzanita)
Cwangciso lweeNqweno zoCwangciso -Cacoud
Qalisa ukukhangela iMac
Ezi zombini zikhetho zikhululekile kwaye zixhomekeke ekusebenziseni i-GPS kunye nobhaliso lwangaphambili lwalo msebenzi kwisixhobo ofuna ukuyilandela, kwiimarike ngoku zikho iinketho ezininzi ezingekho ngqo kubakhi beprojekthi kodwa zinelo msebenzi kunye ezinye iimpawu ezingakumbi ezinokubaluleka kakhulu kwabo bafuna ukwazi konke okwenzekayo nge-smartphone yabo okanye umntu wesithathu.
Enye into yokusetyenziswa kwimihla ngemihla inokunceda ukwazi indawo yeso sixhobo, iGoogle Maps, inokukwazi ukwabelana ngendawo, mhlawumbi ngexesha okanye ixesha lide lisebenza, lichazwe ngakumbi kwaye kufuneka libelane indawo ukuba ibonakale komnye umsebenzisi, kufuneka kuqatshelwe ukuba lo msebenzi ungasetyenziswa kwi-WhatsApp ukuba ufuna ukuthumela indawo ngokuthumela imiyalezo.
Njengamanje kwimarike kukho ezinye iindlela zokukhetha, ezihlawulwa kakhulu, ezingayilandela kwaye zifumane ifowuni kunye nezinye iinkcukacha. Phakathi kwabo i-Avast yenkampani, eyaziwayo kwihlabathi jikelele ngenxa ye-antivirus yayo yeekhomputha inesicelo sayo samadivayisi eselula, iCerberus Antitheft enokuba ineemisebenzi ezifana nokubamba umfanekiso kunye nokurekhoda komsindo kude.
Kodwa eyona nto ibhetele kwimarike akungathandabuzeki Mspy, le sicelo ayikho nje into yokulandelela idilesi, inayo impawu ezininzi ezincedisayo, ezifana neeGo-Wave ezibonelela ngolwazi oluhambelana nolwanqanaba lokutyelela indawo, ukusekwa kwemimandla evumelekileyo kunye nenqatshelwe ngakumbi!
Ukuvavanya ukuChaneka kweDatha yoMnyuso kaGoogle-uyamangalisa!
Venezuela Crisis -Bhlog 23.01.2019
Umbhali oBukhoma, ialbham yefoto